Madaxweyne Farmaajo oo amray in 3 cisho hoos loo dhigo Calanka Jamhuuriyadda iyo Guddi diyaariya Aas Qaran oo la magacaabay. – Hornafrik Media Network
Madaxweyne Farmaajo oo amray in 3 cisho hoos loo dhigo Calanka Jamhuuriyadda iyo Guddi diyaariya Aas Qaran oo la magacaabay.
By HornAfrik	 On Aug 1, 2019
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyskii, qaraabadii iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay Marxuum Cabdiraxmaan Cusmaan Cumar (Eng. Yariisow) oo goor dhaw ku geeriyooday dalka Qatar.
Madaxweynaha ayaa faray dhammaan hay’adaha dowladda in hoos loo dhigo Calanka Jamhuuriyadda inta lagu jiro baroordiiqda Guddoomiyaha oo soconaysa muddo 3 cisho ah.
dhinaca kale Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), Xasan Cali Khayre ayaa magacaabay guddi ka kooban golaha wasiirrada oo ka shaqeynaya aaska guddoomiyihii gobalka Banaadir, Eng. Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Yariisow) oo ku geeriyooday Isbitaal kuyaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar.
Guddoomiyaha Guddiga Qaban-qaabada Aaska Qaran, ahna Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka XFS, Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), oo ku hadlaya magaca Ra’iisul Wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa ugu horreyn tacsi u diray ehelka uu ka baxay iyo dhammaan ummaadda Soomaaliyeed.
Warbaahinta qarankana ayaa iyana laga joojiyay barnaamijyadii caadiga ahaa, lagana billaabay in Qur’aan laga baahinayo arrintaas oo baroor diiqda qayb ka ah.
Gudoomiye Cabdiraxmaan YARIISOW oo geeriyooday – Naxariis Janno Allaha siiyo